जसरी गाउँ लगिंदै छ, त्यसरी नै काठमाडौं ल्याइदिन्छन् त?
बालाजु बसपार्कमा भेटिएकी अप्सराले आफ्ना श्रीमान्‌ले भारतमा काम गर्ने सोच बनाएको बताउँछिन्। “भोट हाल्न त अब ठ्याक जुरे जस्तो हो। आधा पैसा हामीले र आधा गाउँबाट मिलाएका रहेछन्,” अप्सरा भन्छिन्, “घर पुग्न एक जनाकै २७ सय भाडा लाग्छ, एक जनाको भाडामा दुई जना जान पाउने भएपछि हिंडेका हौं।”
ठूला दललाई 'टक्कर' दिँदै रेशमको पार्टी
कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको पार्टीले ठूला दललाई टक्कर दिने देखिएको छ।
उपप्रमुख महिलाको पाँच वर्ष: श्रीमान्‌को साथ पाउँदा सहज कार्यकाल श्रीमान् र परिवारका सदस्यबाट साथ–सहयोग पाएका उपप्रमुख महिलाको कार्यकाल सहज मात्र भएन, उनीहरूले ढुक्कसाथ जनताको सेवामा लागेर आफ्नो क्षमता पनि देखाउन पाए।
ऐनमै व्यवस्था हुँदा पनि गाँजाको औषधीय परीक्षणमा बाधा
ऐनमै रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालमा औषधीय गुण बोकेको गाँजाको चिकित्सकीय परीक्षण र प्रयोग हुन सकेको छैन। यसै कारण नेपालले गाँजाबाट बन्ने औषधिहरूको ‘पेटेन्ट राइट’ समेत गुमाउने जोखिम बढेको छ।
घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा: विगतकै वाचाको निरन्तरता
स्थानीय चुनाव लक्षित घोषणापत्रमा दलहरूले अघिल्ला चुनावमा वाचा गरेका र काम नगरी अलपत्र छाडेका योजना र कार्यक्रम नै दोहोर्‍याएका छन्।
म्यादी प्रहरीको सीपलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? सरकारको लगानीमा म्यादी प्रहरीले तालीम लिएका छन्। उनीहरूको सीपलाई सदुपयोग गर्न सके सरकार र म्यादी प्रहरी दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ।
‘आगोमा सबै जल्यो, रगत लतपतिएको लुगा पनि फेर्न पाएकी छैन’ देश चुनावमय भइरहेका वेला कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-७ मिलनपुर मुक्त कमैया बस्ती भने आगलागीको पीडामा छटपटाइरहेको छ।
निशानामा महिला–बालबालिका देशमा इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने हिंसा पनि चुलिएको छ। र, यसको सबैभन्दा बढी शिकार महिला र बालबालिका बनिरहेका छन्।